अभिनेता प्रकाश राजले गरे फेरि बिहे, कि’स गरेको तस्बिर भाइरल ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसिनेमाअभिनेता प्रकाश राजले गरे फेरि बिहे, कि’स गरेको तस्बिर भाइरल !
उनका छोरा वेदान्तले आफ्ना अभिभावकले बिहे गरेको हेर्न चाहन्थे । त्यसैले आफ्नो विवाहको ११ औं एनिभर्सरीमा उनीहरुले फेरि बिहे गरेका हुन् । प्रकाशले सामाजिक संजालमा यसका केही तस्वीर शेयर गरेका छन् । एउटा फोटोमा प्रकाश घुँडाले बसेर पत्नीलाई औंठी लगाइदिँदै छन् । अर्को फोटोमा उनले पत्नीलाई ओठमा किस गरेका छन् । प्रकाश पत्नी र छोराछोरीसँग निकै खुसी देखिएका छन् ।
मंगलबार प्रकाशराज र पोनी बर्माको विवाहको वार्षिकोत्सव थियो, उनीहरु दुबैले विवाह गरेर वार्षिकोत्सव विशेष बनाएका थिए । विवाहको तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । फ्यानहरूले पनि उनलाई बधाई दिइरहेका छन् । प्रकाश राजले २०१० मा पोनी वर्मासँग विवाह गरे । अभिनेता प्रकाशराज चर्चित कलाकार हुन् । तेलुगु फिल्म मात्र नभएर उनको बलिउडमा पनि राम्रो पहिचान छ ।